Al-shabaab oo hub ay ka furteen Amisom laga soo celiyay. – Hornafrik Media Network
Al-shabaab oo hub ay ka furteen Amisom laga soo celiyay.
Jowhar-Hornafrik-Dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ku wareejiyay hub ay ciidamada dowlad goboleedka Hirshabelle ay ka soo badbaadiyeen weerar gaadmo ah oo Jimcihii aynu ka soo gudubnay Al-Shabaab ku qaadeen lagu qaadeen kolonyo saad u sidey ciidamada AMISOM duleedka magaalada Balcad ee gobolka Sh/dhexe.
Munaasabad lagu qabtay maanta Madaxtooyada dowlad goboleedka Hirshabelle ayuu Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare u mahadceliyay qaar kamid ah ciidamada dowlad goboleedka Hirshabelle oo gurmad u fidiyay ciidamo ka tirsan AMISOM oo jimcihii aynu ka soo gudubnay lagu weeraray duleedka degmada Balcad.
Munaasabadan ayaa waxaa ka hadlay taliyaha ciidamada booliska Hirshabelle Cornel Xasan Dhicisow waxana uu sheegay in gurmad ay sameeyeen ciidamada booliska iyo kuwa Milatarigaba ay ka soo qabteen maleeshiyaadka Al-Shabaab.
“Waxaan ugu tagnay iyadoo ciidamadii Alshabaab ay joogaan goobtii dagaalku ka dhacay,waxaan ka soo badbaadinay qaar ka mid ah qoryihii ku xirnaa hubka ay AMISOM wateen,ciidamo go’odoomay”ayuu yiri taliye Xasan Dhicisow.
Munaasabadan ayaa lagu wareejiyay saraakiil ka socotay ciidamada AMISOM labo qori oo noocoodu yahay Dhashiike oo laga soo furay gaadiid tikniko ah oo lagu gubay duleedka Balcad, waxana ay saraakiisha ciidamada AMISOM u mahadceliyeen ciidamada dowlad goboleedka Hirshabelle.
“Waxaan halkan aan u joogaa in aan dib ula wareegno hub lagu soo qabtay howlgal ay sameeyeen walaalaheena.”ayuu yiri sarkaalka u sareeya ciidamada AMISOM ee ka howlgala dowlad goboleedka Hirshabelle.
“Tan waxa ay cadeyn u tahay in aan iskaashanayno oo aan si wadajir ah oo walaatinimo leh aad inoola shaqeyneysaan.”ayuu sii raaciyay sarkaalkan.
Madaxweyne Dowladda Hirshabelle Mudane Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay in ciidamada gurmadka fidiyay ay ahaayeen kuwo muujiyay geesinimo isla markaana maamulka uu abaalmarinayo.
“Sharafta iyo geesinimada aad muujiseen kuwii gurmaday iyo kuwii taakuleeyay intaba waa mid muujineysa Wadaninimo iyo Soomaalinimo.”ayuu yiri Madaxweyne Waare oo ka hadlayay munaasabad lagu wareejinayay hub ay ciidamada dowlada federalka ka soo badbaadiyeen weerar ay ku qaadeen kolonyo saad u sidey ciidamada AMISOM duleedka magaalada Balcad ee gobolka Sh/dhexe.
Munaasabadan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdulaahi Xuseen,wasiiro,xildhibaano iyo maamulka gobolka Sh/dhexe.
Jimcihii aynu ka soo gudubnay ayaa dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab waxaa ay weerar gaadmo ah ku qaadeen kolonyo ay ilaalinayeen ciidamo ka tirsan AMISOM kuwaasoo saad u sidey ciidamada AMISOM ee jooga magaalada Jowhar.
Maxaabista Soomaaliyeed ee India oo kuwi ugu dambeeyay la soo daayay lagana soo dajiyay Muqdisho.
Yariisow oo ka hadlay sababaha ay u xernaayeen wadooyinka Muqdisho.